FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA NEW ZEALAND HUNTAWAY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika New Zealand Huntaway
'Ity i Ted amin'ny faha-6 taonany. Nomena antsika izy ho toy ny alika kely 8 herinandro fony nipetraka tany amin'ny toeram-piompiana izahay mba hiasa ONDRIN'I , izay vitany tsara. Efa nisy hatrizay Kelpies , fa nahita ny Huntaway tena ilaina kokoa, indrindra amin'ny tokotanin'ny. Niteraka an'i Andriamatoa & Ramatoa B. Smith avy any Quirindi. Tena tsy mivadika izy. Alika iray-olona, ​​nefa mbola tia olon-kafa. Tena marani-tsaina izy, mora mampiofana, tia manenjika ondry sy ny baolina, tia matory ao anatiny ary paty sy fihinana be dia be. Voahidy isaky ny fahavaratra izy. Alika ao an-tanàna izy izao rehefa nifindra avy tany an-toerana izahay. Mitsambikina ny seza fipetrahana zaridaina izy noho ny baiko. Afaka mahita baolina very ao amin'ny valan-javaboary izy amin'ny alàlan'ny fanarahana ny famantarana am-pelatanana. Mila izy fanatanjahan-tena be dia be mitazona foana. Mihombo be izy ary mety ho mafy be. I Ted no alika tsara indrindra nananantsika ary tena tianay izy! '
Sheepdog New Zealand
hazan-dranomasina Zee-ND luh huhnt-Uh-wey
Ny New Zealand Huntaway dia misy endrika, habe, loko ary palitao volo isan-karazany. Ny sasany amin'ireny alika ireny dia lehibe dia lehibe ary ny sasany kely dia kely. Ho an'ireo mpanafika New Zealand Huntaway, ny fijerin'ny alika dia tsy manan-danja loatra amin'ny fahaizany miasa.
Ny New Zealand Huntaway dia alika mpiandry ondry tsy manam-paharoa, amin'ny alàlan'ny fampiasany ny feony hitondrany ny ondry. Miondrika ny alika hanangona ny omby ary manaraka azy ao aoriany. Hetsika manokana novolavolaina ho an'ireo alika ireo tamin'ny fitsapana mpiandry ondry. Ireo hetsika dia nantsoina hoe 'haza lambo', ary farany nanome ny anarany ilay alika. Matetika tsara amin'ny ankizy ary mora ny mankatò lamasinina, alika manan-tsaina ny New Zealand Huntaway. Matetika izy ireo dia tsara miaraka amin'ireo biby fiompy tsy kaninina. Ny New Zealand Huntaway dia sariaka amin'ny olon-tsy fantatra. Tsy alika mpiambina izy ireo ary ny sasany tsy mpiambina tsara. Satria alika mpiompy alikaola no niterahana azy ireo dia mila ampiofanina izy ireo rehefa mivovo sy rehefa tsy mivovo. Ireo alika ireo dia marani-tsaina tokoa, noho izany tsy sarotra ny manao azy. Hoy ny tompona iray: 'Tsy miondrika fotsiny izy ireo rehefa miasa. Nofanina hangina izy ireo ary hamonjy ny feony amin'ny asany. Ka io toetra io dia azo zarina amin'izy ireo. Ny vadiko aza dia tonga niaraka tamin'ny baiko samihafa handefasana ny alikany amin'ny alàlan'ny feo na feo. Tsy manan-tsaina fotsiny izy ireo fa manan-tsaina fatratra. ' New Zealand Huntaways mila an tompony izay milamina, matoky tena ary tsy miovaova , manao ny mazava ny lalàna SY mifikitra amin'izy ireo . Ity alika ity dia tsy tokony havela hiondrika aminao rehefa misy zavatra tadiaviny, satria io dia mamela ny alika hiditra a fihetsika manjakazaka .
Hahavony: 20 - 24 santimetatra (51 - 61 sm)
Lanja: 40 - 65 pounds (18 - 29.5 kg)
Ity dia habe iray amin'ny ankapobeny, ny New Zealand Huntaway dia misy endrika sy habe samihafa.
Ny New Zealand Huntaway dia mirona ho salama tsara.
Ny New Zealand Huntaway dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Afaka miaina sy matory any ivelany ity alika ity raha mbola manana fialofana mety.
Alika miasa tokoa izy io, namboarina ho alika miasa am-boalohany noho izany mila fanatanjahan-tena betsaka. Mila raisina a diabe isan'andro, lava, haingana na jogging any akaikin'ny alika na ambadiky ny olona mitazona ny alika. Aza manoloana mihitsy, araka ny lazain'ny voajanahary fa ny mpitarika kitapo alika no mandeha voalohany. Ho fanampin'izany, hahazo tombony amin'ny toerana hihazakazahana malalaka amin'ny faritra azo antoka izy ireo.
sary Chihuahua voalavo terrier Mix
Manosotra sy miborosy matetika amin'ny borosy mafy volo. Mandrosoa na shampooing maina raha tsy ilaina. Ireo alika ireo dia mpandatsa-dra.
Ny New Zealand Huntaway dia niandoha tamin'ny taona 1900. Raha ny ankamaroan'ny zanak'ondry britanika tany am-boalohany nafindra tany Nouvelle-Zélande dia niasa am-pahanginana ny ondry, dia alika tsindraindray no hiasa azy ireo amin'ny feony. Nahaliana ny mpiandry ondry sasany izany, tiany ny zavatra hitany tao anaty anjomara mpiandry ondry. Ny fiompiana voafantina ireo alika mpiandry ondry sy ny karazany maro hafa dia niampita mba hahazoana ny toetra tiana. Ny Lab Black, Hound, Border Collie, Alika Mpiandry Alemanina dia vitsivitsy monja. Karazana maro hafa koa no tafiditra ao amin'ny makiazy alika an'ireny alika ireny. Nahomby ny fizotran'ny fiompiana, nahatonga ny New Zealand Huntaway, karazana mamporisika ny ondry handroso amin'ny feony. Ny New Zealand Huntaway dia miteraka tena izy ho an'ny tanjona fiandrasana ondry. Nalefa tany Grande-Bretagne izy io, ary mandray anjara amin'ny fitsapana any an-tsaha ary miasa toy ny zanak'ondry. Mihamalaza hatrany amin'ny alika mpiara-mitory io. Amin'izao fotoana izao dia misy NZ Huntaway Club manomboka any Japon.
NZSDTA = Fikambanan'ny mpiandry ondry any Nouvelle-Zélande
Regardo dia Huntaway volombava miasa amin'ny toeram-piompiana ronono.
'Jayda dia alika Huntaway aseho eto amin'ny faha-efatra taonany. Alika miasa any amin'ny toeram-piompiana ronono izy. Ny fiantsoany dia: “Miverina,” “miakatra,” “ao aoriany,” “miteny”, “mandeha amin'ny bisikileta,” “mijanona,” “mihazakaza” ary “manaraha.” Nitaiza tanana tamin'ny alika kely izy, satria novonoin-dreniny daholo ny zanany fa tsy i Jayda. '
Mpivady New Zealand Huntaways olon-dehibe
Lucy, New Zealand Huntaway, 9 taona, monina any Japon
Alikan'i Huntaway any Nouvelle-Zélande - ity i Jimmy (any aoriana) sy ny rahavaviny Jade (eo alohan'izy ireo) manodidina ny 6 volana. Noraisina tamina toeram-piompiana izy ireo tamin'izy 7 herinandro ary monina ao an-tanàna izy ireo miaraka amin'ny tompony.
Anarana mpiandry ondry mainty Chow Mix
wheaten terrier cocker spaniel mifangaro
tariby volo terrier Chihuahua Mix
mihomehy miverina amin'ny alikanao
coton de tulear shih tzu mifangaro
yorkie mifangaro amin'ny shih tzu